NL (ခ) ဒီအမောင်: 04/25/13
ကွမ်းရွက်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ကွမ်းရွက်ကို အနာစိမ်းနဲ့ မွေးကျွတ်နာတွေ ကုသရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သန့်စင်အောင် ဆေးကြောထားတဲ့ ကွမ်းရွက်တစ်ရွက်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့အထိပြုတ်ပြီး ကြက်ဆူဆီ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ကြက်ဆူဆီ သုတ်လိမ်းထားတဲ့ ကွမ်းရွက်ကို ရောင်ရမ်းနေတဲ့ မွေးကျွတ်နာ ဒါမှမဟုတ် အနာစိမ်းပေါ် ကပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် အဲဒီကွမ်းရွက်ကို နာရီ အနည်းငယ်ကြာတာနဲ့ ဖယ်ရှားပြီး အသစ်ကပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကပ်ရင်း အနာစိမ်း ဒါမှမဟုတ် မွေးကျွတ်နာက ပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by nllamin.com at 2:40 AM
အတူနေခွင့် ဝေးလွင့်ပျက်ပျယ် အိပ်မက်နှယ်ပင်......
Posted by nllamin.com at 2:19 AM
ဒါက ငါချစ်တဲ့ နင့်အတွက်
ပေးနိုင်တဲ့ ပေးဆပ်ချင်းတစ်ခု အတွက်ပဲ.. ။
ငါ့အပေါ် မင်းထားတဲ့ ခံယူချက်ကို
မင်း ဟန်ပန် အမှုအရာနဲ့ ငါ... အလုံးဆုံမသိပေမဲ့
ငါ မြင်ယောင်နေပါတယ်.. ။
ဘာမှ ပြည့်စုံချင်းမရှိတဲ့ ငါလိုကောင်မှာ
မင်းတက်မက်စရာ ဘာရှိမှာလဲ ... ဒါကို ငါသိပါတယ်.. ။
အနေအထိုင်ကျဉ်းတဲ့ ငါ့.. ဘ၀ကတော့ ..
မင်းကို ဘာများပေးဆပ်နိုင်ဦးမလဲ ... ။
မင်း မုန်းတဲ့ စကားလုံး အသုံးနှုန်းတစ်ခုကို
မလိုအပ်တော့ရင် ငါ့ကို ပစ်သွားပါ.. ဘာမှမပြောပဲ...။
ငါ ပေးဆပ်နိုင်တဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းတော့ ပြောချင်တယ်... ( ------------------) ။
Posted by nllamin.com at 2:18 AM
နင့်တွက် ငါအမြဲတမ်း လက်ကိုင်ထားနိုင်တာလေးက
နားလည်မှုတွေနဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ တည်ဆောက်မဲ့
တို့နှစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချစ်စံအိမ်လေး တစ်ခုပဲ
Posted by nllamin.com at 2:12 AM
ကတုံးကြီးနဲ့ နှာစီးတတ်တဲ့ ..
ဘုန်းဘုန်းမှာလည်း ... အသည်းနှလုံးနဲ့ပါ.. တကာမ ..
၀င်လေ ထွက်လေ ရှူ့မှတ်တဲ့ တရားက ...
အခုတော့ ချစ်လေ ချစ်လေ ဖြစ်နေပါပြီ...
နှလုံးသား တစ်ခုတည်းနဲ့ ရူးတတ်တဲ့ .. လူတွေကြားမှာ..
ဘုန်းဘုန်းလည်... ကတုံးကြီးနဲ့ တစ်မျိုး ထူးတဲ့ အချစ်ကို...
ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပြုလိုက်ပါတော့... ။
မှတ်ချက်။....။ ကန်တော့ ကန်တော့ .. (စ)သည် (နောက်)သည် ရေးသည်..။
Posted by nllamin.com at 2:09 AM
နင် မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ... ငါ့ ရင်ခွင်ကို .
--►♥◄----(နင် မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ... ငါ့ ရင်ခွင်ကို .. )---►♥◄----
ပြန်လာပါလို့လည်း မပြောဘူး ..
ပြန်သွားပါလို့လည်း မပြောဘူး ..
ဒါကို နင်က .. ငါ့ကို သစ္စာမရှိတဲ့ ကောင်ဆိုပြီး. .
လက်ညှိုးထိုး .. ပြီး.. ပြောပြောနေတယ်... ။
နင်နဲ့ ..ချစ်ပြီး.. အိမ်ထောင်ကြတဲ့နေ့တွေတောင်..
ရက်တွေ လတွေ ..နှစ်တွေတောင် ချီနေပြီး...
ဒါတောင် နင် .. ငါ့အပေါ် နားလည်မှုမရှိသေးဘူး ...
မုန်းလို့မရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့် .. ချစ်နေရရုံပဲရှိတော့တယ်...
ငါ့ဘက်လှည့်ပြီး. . တစ်ခါလောက်ကျင်နာပေးကြည့်ပါလား ..
နင့်မာန .. နင့်အတ္တတွေ ..နင့် စိတ်ဓာတ်တွေ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ..
အစကတော့ တစ်မျိုးလေး ရိုးရိုးလေးလို့ ဆိုထားတဲ့ ငါ့မှာ..
အခုကျတော့ နွားလုံးလုံးဖြစ်နေပြီလို့ ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ်ရတဲ့ အဆင့်ဖြစ်နေပြီ... ။
ကွာရှင် ဖြတ်ဆဲတွေ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိလျှက်နဲ့ ...
ငါ ဘာလို့ နင့်ကို နာ်းလည်ပေးပြီး အခုချိန်တိုင်ထိ ..
ပေါင်းသင်းခဲ့လည်း .. .နင် သိလား ... ..
ဟားးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးး ရယ်ချင်ပါတယ်..
Posted by nllamin.com at 2:03 AM
(ရှက်လို့ သေသွားတဲ့ ၀ိညာဉ်)
ရှက်ရှက်နဲ့ ဘုရင်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကြားရင် အားနာဖို့တောင် ကောင်းတယ်.. ။
Posted by nllamin.com at 2:02 AM
(ဘာကြောင့် .... ။ ဘာကြောင့်....တွေးမိလည်း)
ဒီလိုမျိုးလေး သူငယ်ချင်းတို့လဲ ခံစားဘူးမှာပေါ့..
ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားသော အိမ်မက်တစ်ခုက သူကျွန်တော့်ကို ဥပေက္ခာ မပြုဖို့ပါ...
ကျွန်တော် မျှော်လင့်ချက်မထားဘဲ သူ့ကို ပေးဆပ်ခဲ့တာပါ.. (ကျေနပ်ပါတယ်)
ဒါပင်မဲ့ မျှော်လင့်ချက်မရှိရင်တောင် လူတိုင်းရသင့်ရထိုက်တဲ့
သူဟာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ကြောင့် ကျွန်တော်ကြောင့်လို့ ပြောပင်မဲ့
ကျွန်တော်ဟာ ဘာဘဲလုပ်လုပ် မင်းအတွက် မင်းအတွက်ဆိုပြီး အံကြိတ် ပြုံးနေသူပါ..။
ဘယ်လို ခံစားပီးရေးနေပါစေ နောက်ဆုံးဘူတာဆိုက်တာ
ကျွန်တော် မေ့လို့မရ သူ့ကို ချစ်နေတုန်းပါ..။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရမလည်း ..
ဒါကို ..အမှန်တကယ် L♥VE လို့ ခေါ်ရတော့မလား .... ။
Posted by nllamin.com at 2:01 AM
နင့်ကြောင့်ရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို .. ။
ဘယ်သူက လာကုစားပေးမှာတုန်း.... ။
ရင်ဘက်ကိုဖိ ... အသံမထွက်အောင်... အံကိုကြိတ်ပြီး ..
ဒဏ်ရာတွေကို .. နာကျင်လျက် အခန်းကျဉ်းငယ်ထည်းမှာ.. ။
ငါ့အပြင် .... ဘယ်သူ ရှိနေအုန်းမလည်း .. ။
မိုးမိုးပြောသလိုပဲ .. အရာအားလုံးဟာ...
ငါ..မှားလား.... မင်း...မှန်လား..... ဖြစ်ကုန်ပြီ...။
Posted by nllamin.com at 1:59 AM
ငါ...ခံစားသလို ..♥.. နင် မခံစားရပါဘူး
◄----ငါ...ခံစားသလို ..♥.. နင် မခံစားရပါဘူး----►
နှုတ်ခမ်းဖျားထက်က ထွက်လာတဲ့ .. စကားလုံးတစ်ရပ်က ..
ခမ်းနားလှတဲ့ ... မြို့ပြအိမ်တော်တွေတောင်.. လိုက်မမှီပါဘူး ...။
သွေးထွက်မတတ်ချစ်ခဲ့တဲ့ ..နှလုံးသားကို ..
ရက်ရက်စက်စက် .. ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှ... So Sorry ပါဆိုတဲ့ စကားက..
လှောင်ပြောင်နေတာလား ... ။
ရက် / လ / နှစ်တို့နဲ့ ကျော်ကာ အတူဖြတ်သန်းတဲ့ .. ငါ့အချစ်က ..
မင်း ... စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ရပ်တန့်ကာ တစ်စဆီ ကြေကွဲသွားခဲ့ပြီ..။
အခုတော့ ဒဏ်ရာက မကျက် ..
နှာကစီး.. အဖျားကကြီးတော့ ..
ဒေါသ မီးတွေ လောင်မြိုက်ပြီ..။
Posted by nllamin.com at 1:58 AM